[OFISIALY] dr.fone Toolkit - Android Data Backup & Ampodio: fahaiza-mifantina Exaport ary hamerina
dr.fone Toolkit - Android Data Backup & Ampodio
Flexibly Backup ary hamerina Android Data
Fantenana nomaniny ho solon'izay Android angon-drakitra mba solosaina iray tsindry.
Preview ary hamerina nomaniny ho solon'izay akory fitaovana Android.
Manohana 8000+ fitaovana Android.
Amin'ny dr.fone Toolkit - Android Data Backup & Ampodio, manampy ka indray ny tahirin-kevitra Android Tsy mbola eaiser.
dr.fone Toolkit - Android Data Backup & Ampodio mamela anao mora foana nomaniny ho solon'izay ankamaroan'ny karazana tahirin-kevitra ao anatin'izany ny tetiandro, miantso ny tantara, Gallery, Video, hafatra, fifandraisana, raki-peo, fampiharana ary na dia fampiharana antontan-kevitra (fa miorim-paka fitaovana). Azonao atao ihany koa dia maneho sy fantenana hanondrana misy karazana tahirin-kevitra tianao. Ny fandaharana koa dia mamela anao hamerina ny tahirin-kevitra mora foana ny fitaovana isaky ny mila.
Backup Ny Android amin'ny One Click
dr.fone Toolkit - Android Data Backup & Ampodio mamela anao nomaniny ho solon'izay ny angon-drakitra mba solosaina ao amin'ny iray monja tsindry tsy overwriting misy tahirin-kevitra efa misy. Ny fandaharana ihany koa ny manome anao ny manam-paharoa fahafahana hijery ireo singa ao amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra sy mifidy zavatra rehetra, na ny zavatra izay tianao indray.
Manatsotra ny fiainanao
Ampiasao io tahirin-kevitra Android nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny fitaovana, dia afaka mamorona ny tanteraka rehetra nomaniny ho solon'izay ny tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana ny tahirin-kevitra amin 'izany ny fitandremana tsy manana ahiahy.
Backup antontan-taratasy dia tsy ho hosoloana
Afaka manao nomaniny ho solon'izay amin'ny fotoana izay tianao sy antontan-taratasy rehetra dia nomaniny ho solon'izay tsy manana ahiahy sy tsy azo havaozina amin'ny fomba rehetra, rehefa manao ny Android nomaniny ho solon'izay.
Mora mihevitra Android nomaniny ho solon'izay anatiny sy hamerina amin'ny laoniny angona fahaiza-mifantina
Ity tahirin-kevitra Android nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny rindrambaiko mamela anao mijery mialoha ny tsipiriany rehetra nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy sy mifidy ny antontan-taratasy ianao te-hamerina ny fitaovana.
Backup Apps sy ny fampiharana ny antontan-kevitra
Azonao ampiasaina ity tahirin-kevitra Android nomaniny ho solon'izay, ary indray nomaniny ho solon'izay ny fampiharana sy ny fampiharana antontan-kevitra (fa miorim-paka fitaovana).
Backup Android angon-drakitra in lossless toetra
Miaraka io tahirin-kevitra Android nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny fandaharana, dia afaka mahazo antoka ianao dia very na oviana na oviana ny tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana.
9 rakitra ireo karazana manohana
Ny tahirin-kevitra Android nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny ny rindrambaiko azo ampiasaina nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny fifandraisana, hafatra, miantso ny tantara, kalandrie, Gallery, raki-peo, lahatsary, fampiharana ary na fampiharana antontan-kevitra (na dia miorim-paka ihany ho an'ny fitaovana)
8000+ fitaovana dia manohana
Tsy manohana malaza indrindra ao anatin'izany ny fitaovana Android Samsung, Sony, LG sy hatramin'ny 8000 modely hafa. Mitombo foana ny lisitra toy izany no mety fa ny fitaovana no nanohana. Jereo More >>
Izany Android nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny fandaharam-potoana dia namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Avereno Data from Backup Files
Ary ny nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy, dia afaka hanopy maso sy mifidy ny angon-drakitra tianao indray. Ankoatra izany, dia afaka ihany koa ny hamerina ny angon-drakitra nomaniny ho solon'izay ny fitaovana hafa ny fitaovana.
Backup ka hampody tahirin-kevitra amin'ny fitaovana Android mora foana.
Tsy misy tahirin-kevitra very
Tsy misy angon-drakitra very nandritra nomaniny ho solon'izay, fanondranana, na hamerenana amin'ny laoniny.
Android Data Backup & Ampodio asa ho an'ny Android Indrindra Fitaovana
Hamarino ny tsipiriany MODELY LISITR'IREO Supported fitaovana >>
Fampiharana antontan-kevitra (fa miorim-paka fitaovana)
Android 6.0 sy teo aloha
Android tahirin-kevitra nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny dia vokatra tsara indrindra Nampiaiky volana aho dia maro no nanoro hevitra ahy mafy izay Misaotra ny manam-pahaizana izay manana ny niandohan'ny anao sy ny fankasitrahana sy fisaorana.
Izany fandaharana namela ahy hamonjy be dia be ny fahatsiarovana lehibe!
Tena izany helpfull ho ahy ny nomaniny ho solon'izay ny Android angona.
Android Best Backup Extractor sy ny Backup vahaolana
Samsung kaonty Backup: Ny zavatra rehetra Tsara ho Fantatrao
Full Torolalana ho an'ny Android Ampodio Phone
5 Fomba Backup Android App sy App Data mora
5 Fomba Backup Android ny PC Mora
Top 9 Mahasoa Indrindra Samsung Backup Softwares